အစားအသောက် ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဘယ်အချိန်မှာ စတင်သလဲ? သူတို့က ဘာကိုညွှန်ပြနေသလဲ? - Chit MayMay
Home Lotaya အစားအသောက် ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဘယ်အချိန်မှာ စတင်သလဲ? သူတို့က ဘာကိုညွှန်ပြနေသလဲ?
အစားအသောက် ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဘယ်အချိန်မှာ စတင်သလဲ? သူတို့က ဘာကိုညွှန်ပြနေသလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး အများစုဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ချဉ်ခြင်းတပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် ယခင်က မရှိခဲ့ဖူးသော စွဲလမ်းမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အများစုဟာ ပုံမှန်အစားအစာတွေကို စားသောက်ကြပေမယ့် အချို့ကတော့ အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
အစားအသောက် ချဉ်ခြင်းတပ်မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အစားအစာကို ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းက အန္တရာယ်ကင်းပါသလား? ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ အစားအစာချဉ်ခြင်းတပ်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ချစ်မေမေတို့ကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ချဉ်ခြင်းတပ်စိတ်က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
တစ်စုံတစ်ခုကို မစားရမနေနိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်တွန်းချက်ကို အစားအသောက် ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းလို့ ရည်ညွန်းပါတယ်။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဒီခံစားမှုဟာ ပြင်းထန်လာပါတယ်။ အချိုအရသာကို အရမ်းစားချင်တာမျိုး၊ အချဉ်အရသာ တပ်မက်တာမျိုးတွေကနေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဖုန်မှုန့်၊ ရွှံ့စေး၊ မြေ စသော စားစရာမဟုတ်သော ပစ္စည်းတွေကိုလည်း တောင့်တပါတယ်။ ဒါက သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း (သို့) အထွေထွေအာဟာရ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Picaလို့ခေါ်တဲ့ တပ်မက်မှုအမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းက အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမနှင့် ဒုတိယ သုံးလပတ်ကာလတွေမှာ ပိုအဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အစားအသောက်ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခံစားရပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ရတဲ့ သီအိုရီဆိုင်ရာ အခြားအကြောင်းတရားများစွာ ရှိပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ ၊အနံ့နှင့်အရသာ ခံစားမှုတိုးလာခြင်းနှင့် Psychosocial အချက်များ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘယ်အချိန်မှာ စတင်သလဲ?
ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းက ပထမသုံးလပတ်မှာ စတင်ပါတယ်။ ဒုတိယအပတ်မှာ ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး တတိယမြောက်မှာ စတင်ကျဆင်းလာပါတယ်။ သို့သော် ဒါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။
အချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်လျှောက်လုံးမှာ ချဉ်ခြင်းတပ်မှုရှိပြီး အချို့က ကာလအကန့်အသတ်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ရက်၊ တစ်ပတ် (သို့) တစ်လလောက် အလွန်အမင်း တောင့်တပါလိမ့်မယ်။ ဒါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အများစု ချဉ်ခြင်းတပ်လေ့ရှိတဲ့ အစားအစာများ
အချို၊ အငန်၊ အစပ်အစားအစာနှင့် အချဉ်အစားအစာတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ အတွေ့ရအများဆုံး စွဲလမ်းမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ငန်သော အစားအစာများ
တကယ်လို့ သင့်အစားအစာမှာ ဆိုဒီယမ်ပမာဏ နည်းပါးပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ငန်ပြီး စပ်တဲ့ အစားအစာကို တောင့်တပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနပြုချက်အမျိုးမျိုးအရ ဆိုဒီယမ်လျော့နည်းမှု ထပ်ခါတလဲလဲ ခံစားရတာက ဆိုဒီယမ်စားသုံးမှု တိုးစေဖို့ ဦးတည်နေကြောင်း ပြသနေပါတယ်။
၂။ ချိုသော အစားအစာများ
သကြားချဉ်ခြင်းတပ်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ချောကလက်၊ ရေခဲမုန့်၊ သကြားလုံးနှင့် ဒိုးနက်တွေကို ပိုမိုစားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုမရှိတဲ့ မိခင်တွေထက် အချိုကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်း ပြသထားပါတယ်။
၃။ အပူ၊ အစပ်အစားအစာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအတော်များများက အပူ၊ အစပ်အစားအစာတွေကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ငရုတ်သီးစပ်စပ် ဟင်းတွေကို ပိုတောင့်တတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ အစပ်အစားအစာကို တပ်မက်ရင် ယောကျ်ားလေးဖြစ်နိုင်ပြီး ချိုတဲ့အစားအစာ တပ်မက်ရင် မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အချို့ကဆိုကြပါတယ်။
၄။ အချဉ်အစားအသောက်တွေ ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်း
တစ်ချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဟာ သံပုရာသီး၊ ရှောက်သီး ၊ သရက်သီး၊ စပျစ်သီးကဲ့သို့သော အချဉ်သီးတွေကို အားရပါးရ စားသောက်လိုကြပါတယ်။ citric acid အစားအစာကို တပ်မက်ခြင်းက အစာအိမ်အက်ဆစ်နည်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချဉ်တဲ့အစားအစာကို တောင့်တခြင်းက သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင်စီကဲ့သို့သော ဗီတာမင်အချို့လိုအပ်မှုကို ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။
၅။ အစားအစာမဟုတ်တာတွေကို ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်း
အချို့သော အမျိုးသမီးတွေဟာ အစားအစာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တပ်မက်ကြပါတယ်။ အစားအစာမဟုတ်သော ပစ္စည်းတွေကို စားသုံးခြင်းရဲ့ pathological လုပ်ရပ်ကို PICA လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော အစာစားချင်စိတ်ကြောင့် မိခင်နှင့် သန္ဓေသားအတွက် အန္တရာယ်ရှိသော ရောဂါလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Picaက သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း (သို့) အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကို ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။
၆။ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွှတ်တဲ့ အစားအစာများကို တပ်မက်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွှတ်သော အစားအစာတွေကို တပ်မက်ခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်များနှင့် ဆက်နွယ်နေပါတယ် ။ ဥပမာ- ကော်ဖီ၊ အရက်၊ ပီဇာ၊ အာလူးကြော်နှင့် fast food တွေကို စားသုံးလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ကျန်းမာစွာ ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်း
အချို့အမျိုးသမီးတွေက ကျန်းမာသော အစားအစာတွေကို တောင့်တကြပါတယ်။ ပန်းသီး၊ ဖရဲသီး၊ သစ်တော်သီး ကဲ့သို့သော သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသားများနှင့် နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲကဲ့သို့သော နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို အများစု ချဉ်ခြင်းတပ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ ဒီအစားအစာတွေကို စားသုံးဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အစားအသောက်ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းနှင့် ဂျန်ဒါခန့်မှန်းချက်
အစားအသောက် ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ကျား၊ မ လိင်ကို ခန့်မှန်းနိုင်တယ်လို့ တစ်ချို့က ဆိုကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ချဉ်ခြင်းတပ်မှုကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် ကျားမကို ခန့်မှန်းဖို့ဆိုတာနည်းပညာပိုင်းအရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ ချောကလက်၊ သကြားလုံး၊ ကွက်ကီးများနှင့် ရေခဲမုန့်ကဲ့သို့သော ချိုတဲ့အစားအသောက်တွေကို တပ်မက်ရင် သူမမှာ မိန်းကလေးမွေးနိုင်တယ်၊ အချဉ်၊ အစပ်နှင့် ပရိုတင်းကြွယ်ဝသော အစားအစာတွေကို တပ်မက်လျှင် ယောက်ကျာ်းလေးမွေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါက သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားမရှိသေးပါဘူး။ ကိုယ်ဝန် ၂၀ပတ်ပြီးနောက် အယ်ထရာဆောင်း စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်သာ ကလေးရဲ့လိင်ကို မှန်ကန်စွာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
Previous articleကလေးငယ်တွေ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
Next articleမိဘတိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ ကလေးတွေအနိုင်ကျင့်တတ်လာတဲ့ အကြောင်းရင်းများ (၈) ချက်